I-Attic Endlini Yomndeni ngasemfuleni - I-Airbnb
I-Attic Endlini Yomndeni ngasemfuleni
Mszana Dolna, małopolskie, i-Poland
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Szymon
Indlu yomndeni ama-resort emaphandleni athulile emagqumeni aphakeme, atholakala phakathi kwezitaladi ezigandaywe ngamatshe zase-Cracov nemizila yasezintabeni zase-Zakopane. Uma uvuka ekhaya ukuze uthole umsindo nephunga lemvelo liyigugu, khona-ke ikhaya lethu liyindlela enhle.
Indlu yomndeni eyakhiwe esayithini ngo-1958 ngugogo wami nezingcweti zendawo. Kusukela ngo-2015 indlu iye yathuthukiswa futhi yalungiswa izikhathi eziningana ngesifiso sokugcina imininingwane eminingi yasekuqaleni kanye nezimonyo ngangokunokwenzeka.
Amabhodi amadala aphansi, izindonga nophahla oluphawulekayo. Namuhla umama wami, ongumuntu othatha umhlalaphansi wezimbali, uhlela indlu nengadi.
ubusuku obungu-7 e- Mszana Dolna
4.88 · 59 okushiwo abanye
• Isitolo sokudla esiseduze esingu-0.5km ukusuka endlini
• Esifundazweni sethu esithandekayo uzothola: amabhange, izimakethe ezinkulu, izindawo zokudla, izindawo zokudlela, odokotela bomzimba, inxanxathela yezitolo zokuthenga, odokotela bamazinyo, abakhulayo, izitolo zezinwele, ama-spa nezitolo ezinokuzibophezela okuhlukahlukene kwezimonyo. Futhi imizila yasezintabeni.
• I-Jampoff ekahle kakhulu ukuya endaweni yasezintabeni Isiqhingi
sase-Beskids. • Isikhumulo sezindiza sase-Cracov 60 km
• I-Zakopane 60 km
• I-Auschwitz 120
km • Wieliczka 45 km
Othintwayo otholakalayo nge-app ye-Airbnb.